Uyidibanisa njani iFonti yohlobo lweAdobe kwiWebhusayithi yakho yeSquarespace
I-squarespace 6 idibene noTypekit ukuvumela ngokulula ukuba usebenzise iifonti zesiko lweTypekit ngokulula. Ngaphambi kokuba ungeze iifonti zesiko seTypekit kwindawo yakho yeSquarespace, nangona kunjalo, kuya kufuneka ubeneakhawunti ye-Typekit kwaye ukhethe iifonti oza kuzisebenzisa kwindawo yakho.
Ngena ngokulula kwindawo yakho yeSquarespace, vula uMhleli weSitayile, kwaye ucofe naziphi na izinto ze-typography kuluhlu loMhleli weSitayile. Kuluhlu lwamagama, iifonti zahlulwe zangamaqela amathathu: phakathi eb - ikhuselekile f Onts , uluhlu oluncinci lweefonti ezifumaneka kwiikhompyuter zonke; f onts ngohlobo , ubungakanani obukhethekileyo bokukhetha iifonti zobungcali ezivela kuTypekit; kwaye uphando f Onts , ukhetho olukhulu lweefonti ezisuka kwiGoogle Webfonts.
Uluhlu lweTypekit olibonayo luyisampulu encinci yeefonti zohlobo lweTypekit. Ungakhangela kuzo zonke iifonti ezinikezelwa ngu Initrogen . Sebenzisa ifonti yohlobo lwe-typekit engekho kuluhlu lwefonti kuMhleli weSitayile, ufuna iakhawunti ye-Typekit.
Nantsi indlela yokufumana iifonti zohlobo lweTypekit:
Yintoni i-clonidine hcl 0.1mg esetyenziselwa
1Bhalisela iakhawunti yeTypekit.
Khetha isicwangciso sexabiso esilungele kuwe Initrogen . Isicwangciso sexabiso simisela ukuba zingaphi iifonti onokufikelela kuzo.
UTypekit unikezela nge-akhawunti yesilingo yasimahla engaphelelwa lixesha.
MbiniBhrawuza iifonti kwilayibrari yetypekit.
Xa ufumana ifonti oyithandayo, cofa indawo ethi Yenza iKhithi.
3Yenza ikhithi yakho.
Kwifestile ebonakalayo, nika igama lakho kwiKiti kwaye udwelise nayiphi na imimandla esetyenziselwa ukufikelela kwindawo yakho. Qiniseka ukuba ubandakanya i-URL yeakhawunti ye-squarespace ( iakhawunti yakho .squarespace.com) kunye ne-domain yesiqhelo (www. indawo yakho .com) ukuba ukongeze enye kwindawo yakho.
4Cofa iqhosha lokuqhubeka.
Cebisa idosi yamanyathelo amabini
5Cofa iqhosha lokuqhubeka.
Iscreen soMhleli weTypekit siyavela kunye nefonti oyikhethileyo kwiNyathelo 2.
6Cofa kwiPapasho iqhosha.
Oku kugcina iKhithi yakho.
7Fumana i-ID yakho yeKiti.
8Yongeza i-ID yeKhithi kwindawo yakho yeSquarespace.
Ngena kwindawo yakho kwaye wongeze i-ID kuMphathi weSayithi → Useto → Ngokubanzi → Useto lwe-ID yethikhitekiti.
I-fluoxetine 10 mg ithebhu
9Gcina utshintsho lwakho.
Naziphi na iifonti ozifakayo kwiKiti yakho kwiTypekit ziya kuthatha indawo yoluhlu olungagqibekanga lweefonti zeTypekit kwaye ziya kuboniswa kuzo zonke izintlu zefonti kuMhleli weSimbo.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-lithium
I-philips ubisi lwe-magnesia dosage
yintoni ewe ngeSpanish
Iziphumo zokuncipha komzimba
Ngaba i-nucynta ikuphakamisa
zoloft iziphumo ebezingalindelekanga zokuqala